आमाबाबुले outraged - सान्टा क्लाउस अवस्थित छैन! | Apg29
आमाबाबुले outraged - सान्टा क्लाउस अवस्थित छैन!
"हामी स्तब्ध थिए!"
खाली पसलमा आतंक। तस्वीर: YouTube / SVT।
"पहिलो खण्ड गर्न सान्ता अवस्थित कि गर्दैन र त्यहाँ जो हाम्रो लागि धेरै थियो अप कपडे वयस्क छन् भन्न।"
tisdag3december 2019 19:50
धोखा र छोराछोरीलाई धोका
पनि केही मसीहीहरूले - क्रिसमस समयमा हरेक वर्ष मैदान मा विश्वास गर्न आफ्ना छोराछोरीलाई धेरै वयस्क सिक्ने। यो झुक्याउन र छोराछोरीलाई धोका हो। तपाईं तिनीहरूलाई आधार मा विश्वास गर्न सिकाउन हुँदैन, तर येशूले दिनुपर्छ!
आगमन पात्रो "खाली पसलमा आतंक" को पहिलो खण्ड केही आमाबाबु हो, पनि मिडिया outraged छ। अर्थात् यो सान्ता अवस्थित छैन भनेर सुझाव! थियो
"हामी स्तब्ध थिए!" कार्यक्रम देखेर पछि SVT गरेको फेसबुक पेज मा एक अभिभावक लेख्छन्। "हाम्रो बच्चाहरु सान्टा क्लाउस विश्वास र अब हामी यहाँ बस्न र प्रश्नहरूको बारेमा चिन्तित हुन यस बारे हुनेछ।"
ठीक छ, के तपाईं पोस्ट बारेमा भन्न सक्छौं?
यदि रूपमा पर्याप्त थिए। यहाँ थप छ:
"हामी स्तब्ध थिए! छोराछोरी यो वास्तवमा हेर्न जारी हुनेछ भने थाहा छैन। "
डोनाल्ड Trumps सत्य
त्यहाँ प्रश्न सान्ता अस्तित्व धेरै संवेदनशील हुन थाल्छ। गत वर्ष पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उहाँले साइटको अस्तित्व प्रश्न एक बुट।
7 वर्षीया Collman लोयड डोनाल्ड ट्रम्प गरेको गर्न आए फोन- प्लट मा। शायद त्यो सान्ता विश्वास गर्न निकै पुरानो थियो भने उहाँले छक्क परे, तर एक परिवार सञ्चालन सान्ता अस्तित्व केरकार गर्न अब उनको बनाएको छ।
वयस्क के सहयोग गर्न सक्छ तर यो झूट संग छोराछोरीलाई indoctrinate भने! तिनीहरूले के को डर हो? सत्य साँच्चै सान्टा क्लाउस अवस्थित छैन भन्ने छ?
"धेरै वर्ष को लागि तिनीहरूलाई झुट बोले"
रिपोर्ट "एक अद्भुत झूट" लेख्न विशेषज्ञहरु बयल र McKay कि सान्टा क्लाउस छोराछोरीलाई संग सम्बन्ध बिगार्न सक्छ कि हामीलाई कसले आमाबाबुले। यो बच्चा मा उत्पन्न गर्न सक्छन् अन्य सन्दर्भहरूमा आमाबाबुको विचार गर्दैन।
"सबै छोराछोरीले अन्ततः बाहिर पाउनुहुनेछ तिनीहरूले वर्षसम्म तिनीहरूलाई झूट गरिएको छ, र यो तिनीहरूलाई आफूले सिकेका अन्य कुराहरू जो पनि झूट थिए आश्चर्य सक्छ", प्रोफेसर बयल भन्छन्।
"यदि सान्टा क्लाउस अवस्थित छैन, त्यहाँ परियों छन्? जादु छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ? आमाबाबुले त विशेष र जादुई कुरा बारे झूट गर्न सक्षम छन् भने, तिनीहरू साँच्चै बुद्धि र सत्यको संरक्षक रूपमा विश्वसनीय गर्न सकिन्छ? बच्चाहरु प्रश्न हुनुपर्छ मिथक कि प्रकारको विश्वास प्राप्त गर्न नैतिक "रिपोर्ट मा विशेषज्ञहरु लेखे।
तिनीहरूलाई येशूको बारेमा सत्य र देशमा को झूट सिकाउन राम्रो छ किन यो छ। त्यसपछि, तिनीहरूले सधैं भरोसा गर्न सक्छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ साँचो छ, र आफूलाई आफ्नो भरोसा तय गरिनेछ।
म एल्फ-विश्वास बच्चाहरु को लागि भन्दा वयस्कहरूको लागि थप महत्त्वपूर्ण छ भनेर शक। त्यहाँ सान्टा क्लाउस विश्वास सामयिक भ्रमित वयस्क छ, तर सबै भन्दा छैन। हामी किन यो संग बच्चाहरु मा लुकेको गर्नुपर्छ?
सान्टा क्लाउस विश्वास गर्ने एक Asatru मान्छे - एक दिन क्रिसमस हव्वाले 2007 अघि, म यस्तो भ्रमित व्यक्ति लेखे। उहाँले सान्ता उहाँले आफ्नो घर मा छ जो एक आत्मा छ कि विश्वास गर्दछन्। उहाँले एक राक्षस वर्णन!
यो सान्टा क्लाउस साँच्चै केही लागि हो कि एक राम्रो वर्णन छ। सान्टा क्लाउस सट्टा येशूको उहाँलाई विश्वास गर्न गलत बाटोमा लैजाने मान्छे चाहने दुष्ट आत्मा छ!
सेन्ट निकोलस 300 का मा पश्चिमी Lill-एशिया मा Myra को बिशप थियो। उदारता थियो किनभने उहाँले एक सेन्ट घोषणा भएको थियो।
उहाँले तिनीहरूलाई सुन सिक्का दिएर वेश्यावृत्ति महिला सुरक्षित बताए छ। उहाँले पछि schoolchildren गरेको संरक्षक सेन्ट भयो।
सेन्ट निकोलस लिजेन्ड अनुसार धेरै कामहरू गरे। उहाँले रात तिनीहरूलाई पैसा फालिएको द्वारा गरिबी देखि एक परिवार सुरक्षित एकपटक। यसरी आजको सान्टा क्लाउस रूपमा उपहार दिए!
तर निकोलस मरे परमेश्वरको जागा शक्ति पनि थियो। उहाँले पनि नाभिकहरु को आँधीबेहरी मा नष्ट गर्न थिए उद्धार।
निकोलस beatified गरिएको थियो, त्यो सुरुमा सबैभन्दा नाभिकहरु द्वारा प्रशंसित भएको थियो।
उहाँको दिन क्याथोलिक विद्यालयमा क्रिसमस प्ले संग डिसेम्बर6firads। भएको राम्रो थियो जो बच्चाहरु प्रस्तुत गर्यो।
राम्रो वा downright Mischievous भएको थियो नगर्ने ती रूपमा सेन्ट निकोलस नेतृत्व लुगा एक राक्षस आंकडा गरेर चामल को एक स्वाद पायो।
मा अंग्रेजी बोल्ने सेन्ट निकोलस पछि सान्ता क्लाउस सान्टा क्लाउस रूपमा चिनिने देशहरूमा।
निर्मूल सेन्ट उपासना किनभने आफ्नो लोकप्रियता को, सेन्ट निकोलस उठाउन् सक्छ जब सुधार समयमा।
त्यसपछि तिनीहरूले उहाँलाई सान्टा क्लाउस हुन गरे! उहाँले एक बिशप टोपी बिना त थियो।
Chronologically, किनभने निकोलस डिसेम्बर मा मृत्यु भएको थियो यो राम्रो सज्जित। अब उहाँले क्रिसमस सँग सम्बन्धित थियो र सान्टा क्लाउस रूपमा उपहार दिने।
सान्टा क्लाउस को आजको heresy अर्को heresy देखि यसरी उत्पत्ति र जो आज मृत सेन्ट भन्दा केही बढी छ।
2017 द्वारा, अखबार यो एक भेट्टाएको छ कि संसारको इतिहास लेखे pelvic हड्डी Nicolaus देखि।
सान्टा क्लाउस ।
बाँकी सान्टा क्लाउस को रहलपहल दक्षिणी इटाली मा Basilica di San निकोला मा हुन भने। उहाँले 150 बारेमा सेन्टिमिटर एउटा सानो, कलिलो मानिस थिए।
त्यसैले यदि सान्टा क्लाउस सबै भएको छ, उहाँले आज मृत्यु प्रत्याभूति छ! क्याथोलिक संसारमा ठूलो पर्वहरू संग डिसेम्बर6मा आफ्नो मृत्यु मनाइन्छ।
थुप्रै सान्टा क्लाउस केवल काल्पनिक चरित्र बच्चाहरु विश्वास र आफूलाई त्यसैले उहाँलाई यति धेरै छैन जोर संलग्न गर्न सिकाउनुभयो छन् भन्ने छ।
तिनीहरूले केही अर्थ भन्छन्, तर किन यो उहाँको बारेमा ती ठूलो जायका छ? तिनीहरूले बच्चाहरु उहाँलाई विश्वास गर्दा किन सिकाउँछ?
सान्टा क्लाउस अलौकिक शक्ति संग चित्रण गरिएको छ, त्यो अर्थमा उहाँ छोराछोरीलाई असल भएको छ भने त्यो पनि "हर एक ठाँउ" छ थाह छ कि "सबै-थाह" छ।
उहाँले प्रकारको र भर उपहार र प्रस्तुत धेरै संग "राम्रो" र बस overwhelms वर्णन गरिएको छ।
अर्को शब्दमा, परमेश्वर! उहाँलाई तस्वीर अध्ययन गर्दा यो स्पष्ट देखिन्छ। उहाँले एक भगवान जस्तो देखिन्छ - एक मूर्ति!
आजको सान्टा क्लाउस तीन अलग अलग प्रसङ्गहरू एक भ्रम छ। एक क्याथोलिक सेन्ट, किसान समाज र क्रिसमस बाख्रा देखि vresige यार्ड षड्यन्त्र!
के शब्द "brownie" गर्छ? शब्द षड्यन्त्र bisse एक छोटो रुप हो। यो फारम खाली र dialectal Bise छ। यो टाउको, शीर्ष कुकुर, वा स्ट्रबेरी हो।
हामी Christmases मा जो उपासना गर्छौं?
धेरै वर्ष पहिले म, चार वर्ष केटा भन्न सुनेको "म येशू तर सान्टा क्लाउस छैन मा विश्वास गर्छन्।" यो एक बुद्धिमानी बच्चा थियो।
तर केही वयस्क रूपमा बुद्धिमानी तिनीहरूले वर्ष पछि वर्ष रूपमा हुन थाल्छ छैन, आधार मा सानो बच्चाहरु को लालच त्यहाँ। किन यो बच्चाहरु सान्ता विश्वास प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ म बुझ्न छैन। बच्चाहरु त्यहाँ तिनीहरूलाई मा lurking वयस्क सम्म कुनै tomtetro छ। तर सबै छोराछोरीले हृदयमा परमेश्वरको एक विश्वास तिनीहरूले परमेश्वर र येशू अनुसन्धान अनुसार बारेमा सुनेका अघि छ। यो अनुसन्धान उपदेशक 3:11 मा पनि बाइबल पुष्टि गर्छ।
जो हामी Christmases बारेमा घोषणा, र हामीले उपासना गर्ने? यो येशूको बारेमा कुरा गर्न समय। साँचो, यो क्रिसमस थियो कि एक ऐतिहासिक तथ्य हो, येशूको जन्म भएको थियो। तर उहाँले जन्मेको उत्तिकै ऐतिहासिक तथ्य छ!
र Christmases मा हामी सामान्यतया येशू पृथ्वीमा जन्मेको जोड। उहाँले किन जन्म भयो? तपाईं र मलाई सेव - उहाँले सुरक्षित गर्न जन्म भएको थियो। उहाँले मरणासन्न बढ्दो द्वारा गरे।
वास्तवमा उपहार संग आउँदै छ?
यसलाई हामीले हाम्रा छोराछोरीको हामी साँच्चै Christmases मा मनाउन जाँदै छन् जो बताउने समय छ। र यो पनि गर्ने यो साँच्चै उपहार संग आउँदै छ हाम्रो बच्चाहरु बताउन समय।
याकूब 1:17। हरेक असल र हरेक उत्तम उपहार कोसँग र कुनै परिवर्तन हुन्छ छ प्रकाश र अँध्यारो बीच कुनै स्विच, रोशनी को पिता बाट आउँदै, माथि हो।
र उपहार असीम दिइएको तर हामी दयालु भव्य र प्रतिभाशाली छन्!
सबैभन्दा ठूलो उपहार परमेश्वरले संसारमा पठाउनुभएको जसलाई येशू छ। हामी प्रभु येशू स्वीकार गर्दा हामी सुरक्षित हुन र हाम्रो सबै पाप क्षमा प्राप्त।
Publicerades tisdag3december 2019 19:50:06 +0100 i kategorin och i ämnena:
"परमेश्वरको त्यसैले विश्व भनी विश्वास नष्ट हुँदैन तर अनन्त जीवन छ हरेक एक उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरा [येशूले] दिनुभएको प्रेम।" - 3:16
"तर सकेसम्म धेरै प्राप्त उहाँलाई [येशूले], तिनीहरूलाई उहाँले आफ्ना नाममा विश्वास तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान गर्ने अधिकार दिनुभयो।" - यूहन्ना 1:12
"तपाईंले आफ्नो हृदयमा येशूले प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार र विश्वास भने परमेश्वरले उसलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो, तपाईं सुरक्षित गरिनेछ।" - रोम 10: 9
सुरक्षित गर्न र तपाईंका सबै पापहरू क्षमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? यो प्रार्थना:
- येशूले, म अब तपाईं प्राप्त र तपाईं प्रभुको रूपमा स्वीकार। म परमेश्वरले मरेको तपाईंले उठाएको भन्ने विश्वास गर्छन्। म अब सुरक्षित छु भनेर धन्यवाद। तिमी मलाई क्षमा गरेका छौं भनेर धन्यवाद र म अब परमेश्वरको सन्तान हुँ भनेर धन्यवाद। आमिन।
तपाईंले माथि येशूले प्रार्थनामा पाए?
söndag5april 2020 14:24
Barna sinne. Frihet i allt fri i hjärtat o tankar .Inga måsten. Kärlek är ett bröd som smakar gott o har liv. Tänkt så fint allting är. Allt är gott precis allt. Jesus lever i mitt hjärta
Björn Hellman: Predikanten Rodney Howard-Browne kan dömas till fängelse för brott mot coronalagar
Gabriella : Bibliska bekännelser
Lena Henricson : Dröm om uppryckandet